I-Sesamol Powder (533-31-3) Umzi mveliso wababoneleli
I-Sesamol sisixhobo se-phenolic esifumaneka kwimbewu yeesame kunye neoyile yesesame kwaye ithathwa njengeyona nto iphambili kwi-antioxidant ...
Igama lemveliso I-Sesamol
I-Sesamol yinkompo ye-phenolic efumaneka kwimbewu yesesame kunye neoyile yesesame kwaye ithathwa njengeyona nto iphambili kwi-oyile, ukuthintela ukonakala kweoyile. Ikwanokuthintela ukonakaliswa kweoyile ngokusebenza njenge-antifungal. I-Sesamol inqabile inyibilika emanzini, kodwa ayilunganga ngeoyile ezininzi.
I-Sesamol powder ikhutshwe kwimbewu yeSesamol eneetoni zokubonelela ngezibonelelo ezahlukeneyo kubasebenzisi. Lo mgubo une-antioxidants, ethintela ukonakala kweoyile ngokwenza njenge-antifungal kunye nokukhusela umzimba wakho kumonakalo weeradicals simahla. Ioyile yeSesame isetyenziswa kakhulu kumayeza e-Ayurveda ukunyanga imiba emininzi yezempilo ngaphandle kwemiphumo emibi. La mandla aneempawu ezininzi ze-pharmacological ezibandakanya i-antioxidant, anti-inflammatory, kunye neproprotective properties. I-Sesamol, isondlo sesondlo se-phenolic antioxidant esicetyiswe kwimbewu yeesame, ibonakaliswe ukuba inezinto ezinokuthi zenze i-antiticancer.